Salon r�gional de l’emploi et de la jeunesse TOAMASINA
Tanora miiasa 23 420 no tonga nitsidika
Notontosaina nandritran′ ny roa andro teto toamasina ny salon r�gional de l’emploi et de la jeunesse ny 29 sy 30 aprily 2014, zay nokarakarain’ny zay nokarakarain’ny BIT (Bureau international du travail) miara-miasa amin’ny minisiteran’ny asa sy ny lalana sosialy ary minisiteran’ny tanora, ny alavoly sy ny fanatanjahantena teo manoloanan’ny Lapan’ny tananan’ny Toamasina.
Nandritr’izay 5 taona niainan’ny Madagasikara tao anatin’ny krizy izay dia manodidina ny 400.000 ny tsy an’asa, manginy fotsiny ireo orinasa nikatona, tsy vitsy ihany koa ireo very asa.
Olana goavana eo amin’ny tanora ny tsy fananana asa amin’izao fotoana izao hany ka lasa mirenireny eny rehetra eny izy ireo,ny sasany aza moa araka ny fanadihadiana dia lasa voasarika amin’ny fidorohana zava-mahadomelina ka lasa manaotao foana. Isany navoitra izany resaka izany tamin’ny fanaovana ity � salon r�gional de l’emploi et de la jeunesse� ity.
Dradradradraina foana fa ny tanora ny ho avin’ny firenena, matetika anefa ireo orinasa dia tsy mandray tanora vao nahavita fianarana fa tsy maintsy manana traikefa mandritran’ny 5 taona na 3 taona farafahakeliny vao raisin’ orinasa. Mba hanamaivanana izany olan’ny tanora izany indrindra no nanaovana ity � salon de l’emploi � ity, mba hahaizan’ny tanora misafidy ny lalam-piofanana arahiny ka tsy hampanahirana azy intsony amin’ny fitadiavana asa.
Nanambaran’ ny minisitry ny asa sy ny fampianarana ara-teknika, Atoa Horace Gatien ihany koa fa tsy tokony ho sakana intsony ny tsy fananan’ny tanora � exp�rience professionnel � raha toa ka efa nianatra mahakasika ilay asa izy. Niavaka kely moa ny fankalazana tamin’ity taona ity satria dia tena natokana ho an’ny tanora tokoa izy ity.
Ka toy izao ny vokatra sy isa azo tamin’izany:
- 270 tanora nahazo fihofanana momba ny famoronan’asa.
- 512 Tanora tonga nanao fangatahan’asa.
- 500 Tanora nametraka CV tamin’ireo orin’asa.
- 53 tanora nangataka anao fihofanana ara-kasa.
- 23 420 tanora nanao ny fitsidihana ny trano eva.
- 55 trano eva nandray anjara.
Naneho ny fisaorana ho an′ny rehetra ny mpikarakara amin′ny fahatratrarana ny tanjona.
(31) Lantomalala S. - Prud′Homme R. : 02-05-2014 - 10:00